Zvinhu zvinofambidzana 'Boom!’ ~ Pet Rescue Firecrackers
Chimwe chezvinhu batsira zvishandiso iwe kuwana muna Pet Rescue ndiye Firecracker, Kana kutarira nechepasi kodzero chidzitiro wako uchawana zvishoma mita kuti zvinodiwa kuti kudya pfungwa, kuti ukava anofambidzana nani. Zadza mita ichi yokururamisa zvidhinha uye zvishoma firecracker rinooneka, ichi chiwanikwa shoma kunokosha chaizvo, Zvinongoreva ratidza nacho mbiru unofanira kubvisa (sezvinoita munhu ane yengururu achishamisika puppy pamusoro kuda miromo yesimbi kure) uye mbiru iyi kusanganisira mabhokisi simbi chero kana girazi nyaya vachava destroyed..except kuti chisavepo kana rakakiyiwa zvidhinha, Anoda kutanga anokiyinura.
Unogona swatanudza CRACKER wako zvakarurama mbiru uye wasarudza mutema gupa kuti moto!
Chinofadza ndechokuti pachena dzinovaraidza vanoda mafayawekisi uye zvikuru nomufaro kujaira kana baba namai kuburikidza kuputika uye vanomhanyira kunovanda kuseri kwavanaamai kure kusvikira pasi (*ona izvi haushandi muupenyu chaihwo, imbwa vakawanda kwazvo pyrotechnophobes!). Kudzidza kusika firecrackers izvi nokukurumidza uye zvakanaka uye achiziva kana kuzvishandisa uye kana kuti vanonyatsoteerera kwavari zvichida mumwe unyanzvi zvikuru mutambo uyu!
Unofanira dont kushandisa Firecracker wako mangoti zvikaonekwa, ayo asina kuenda kupi asi chete yeuka kuti unogona chete kuva rimwe panguva, kuzombotaurazve pfungwa iwe uwane Hazvizochengetwi ari mita. Unogona chete kutanga kuwana mumwe CRACKER kamwe wokutanga yakatogadzirwa kure. Nokuda kwaizvozvi ini zvakaita kuisa kure tika angu sezvo vanoonekwa. Kana uine chipfuwo muchayamwa pamusoro Musara panyika kana nenyere unogona dhumhira naye kure achivharidzira firecracker kukwira mbiru kuruboshwe ayo (Regai ndibvunze sei dzinovaraidza dont kuwa kurudyi!)
Kuronga kubva CRACKER ingori nyaya kana kusarudza munyoro chishambwe, kana kana iwe kushandura pfungwa dzako uye vanoda vanonyatsoteerera payo chete yarova tsvuku 'X'. Yeuka kuti zvidhinha dont nguva dzose kuwira ikarurama, vane katsika Cascade kupinda nzvimbo, izvo zvinogona kazhinji akapamba paburi yako kana uri kuedza kumisa mumwe mubatanidzwa mikuru. Kana ndeizvi pazasi bhodhi nechinhu pamusoro pavo kuti zadza nzvimbo ivo scoot pamusoro (zvakare kuruboshwe) uye vanobatana pamwe neimwe zvinogumbura asara . Izvi batsira chaizvo kuramba tichifunga kunyanya kana unofanira kubvisa imwe chikamu inoperera panzira kuzadzikisa chinangwa chako.
Pet Vanonunura Saga Facebook Game
Pet kununura the saga – zviri zvizhinji zvinobatanidzwa pane anotarisa!
General Pet Ndisunungurei zvahungava hwakaita zvakavimbika uye muromo
Kunyengetedzana Pet Vanonunura Saga uye Facebook
danho 27 – Pet Rescue Saga
danho 59 – Pet Rescue Saga
Pet Rescue Saga – danho 29
Pet Rescue – danho 43
Top Pet Ndisunungurei mazano uye mazano
Pet Vanonunura Saga Windows Phone
Download Pet Vanonunura Saga PC